September 2019 - Page 5 of 5 - Puntland Mirror Believable Media Website
September 5, 2019 Puntland Mirror 0
Badhan-(Puntland Mirror) Arbacadii shalay waxay u ahady maalin doorasho magaalada Badhan ee gobolka Sanaag, halkaas oo xubnaha cusub ee golaha deegaanka ay doorteen duq cusub iyo ku xigeen. Axmed Maxamed Timir ayaa loo doortay duqa […]
September 4, 2019 Puntland Mirror 0
Muqdisho-(Puntland Mirror) Soomaaliya ayaa sheegtay in aysan marna gorgortan ka geli doonin muranka badda ee kala dhaxeeya Kenya. Wasiir dowlaha arrimaha dibada Soomaaliya Cabdulqaadir Axmed Khayr oo la hadlayay warbaahinta dowladda ayaa sheegay in marnaba […]
September 3, 2019 Puntland Mirror 0
Muqdisho-(Puntland Mirror) Taliska Mareykanka ee Afrika (AFRICOM) ayaa bayaan ay soo saareen ku sheegeen in maanta oo Talaado ah ay duqeyn ka geysteen deegaanka Jilib ee gobolka Jubbada Hoose. “Wakhtigan, waxaan ogaanay in duqaynta ay […]
Badhan-(Puntland Mirror) Puntland denied allegation that a weapon found from plane at Qardo airport last week. Speaking to reporters in Badhan town on Monday, Puntland’s minister of civil aviation and airports Hussein Osman Lugtor said […]
September 2, 2019 Puntland Mirror 0
Badhan-(Puntland Mirror) Puntland ayaa beenisay in hub lagu qabtay garoonka diyaaradaha ee magaalada Qardho. Shir jaraaid oo uu ku qabtay magaalada Badhan maanta oo Isniin ah wasiirka duulista iyo garoomada Puntland Xuseen Cusmaan Lugtoor ayaa […]
Muqdisho-(Puntland Mirror) Ciidamada ammaanka ee dowladda federaalka Soomaaliya ayaa maanta oo isniin ah ka hortagay gaari laga soo buuxshay walxaha qarxa gudaha magaalada Muqdisho. Haayadaha ammaanka ayaa sheegay in gaariga oo noociisu ahaa Toyota Noah […]
September 1, 2019 Puntland Mirror 0
Kismaayo-(Puntland Mirror) Dowlad goboleedka Jubbaland ayaa bayaan ay soo saartay maanta oo Axad ah walaac uga muujisay xiritaanka wasiirkeeda amniga Cabdirashiid Xasan Nuur kaasoo Sabtidii lagu xiray garoonka diyaaradaha ee Muqdisho. Jubbaland ayaa ku tilmaamtay […]